Ingaba injini ephakamileyo yokukhangela isebenza njani ekusebenziseni?
Ngelishwa, akukho ncazelo elula yenkqubela phambili kwinkqubo yokukhangela injini ephezulu kunye nokusebenza ngokuqhelekileyo okufunekayo ukugqiba umsebenzi. Into leyo kukuba i-Google isebenzisa iziganeko ezingaphezu kwe-200 xa zigqiba ukunika izikhundla zokubeka indawo nganye kwiphepha lewebhu elifumaneka kwi-Intanethi. Ukongezelela, ezi zigqibo ezibandakanyiweyo kwi-Google yokukhangela i-algorithm ngokutsha zihlala ziguqulwa rhoqo kunye nokuhlaziywa rhoqo kwe-algorithm. Kuthetha ukuba iindlela ezikhoyo zokufikelela kwi-injini ephezulu yokucinga kunye nokucwangcisa izicwangciso zamanyathelo ezifunwayo azifunyananga nxamnye nezinto ezisebenzayo, umzekelo, wasebenzisa into malunga neminyaka emihlanu edlulileyo. Ngoko, masenze isiqinisekiso sokuthi silandela ubuchule bokusetyenziswa kwe-SEO njengamanje, ubuncinci ukuziva uqinisekiswe naluphi na ukuphulwa kwe-SEO ekhulayo - find my super member number. Kungenxa yokuba abaninzi babo baya kuhlawulwa ngeprogram ye-website yakho, ngaphandle kwesaziso esifutshane.
Ngezantsi ndiza kuluhlu lwezinto eziphambili zokufikelela kwindawo ephezulu yokukhangela injini, kunye nemisebenzi yokwenza umsebenzi oza kunikwa iGoogle. Okokuqala, yonke injini yokukhangela (kwakunye ne-Google ngokwayo) yithanda umxholo wephepha lewebhu eliphezulu. Okwesibini, inzame zokwakha izakhiwo zendalo zingasebenza njengombonakaliso onamandla. Ekugqibeleni, kukho ezinye iinkalo zokubaluleka ezongezelelweyo ezifanele ziqwalaselwe ngokunjalo.
Inkqubo yokulungiswa kwiphepha lekhasi ihlanganisa umxholo wephepha lewebhu (umbhalo obonakalayo), kunye nemifanekiso, iividiyo, kunye naziphi na ezinye iifayile zeendaba. Kwinqanaba lokuphuhlisa iincwadi eziqhelekileyo kwiphepha lemisebenzi zizinto ezisisiseko zemethadatha ezifana neetekisi zetekisi kunye nenkcazelo.
Umxholo osemgangathweni kufuneka ubhalwe ngokwemvelo, ngaphandle kwendlela efanelekileyo yomsebenzisi (imibhalo yombhalo oyingqayizivele, ivolumu ekhuthazwayo kwindawo ethile malunga namagama ayi-1000). Ngexesha elifanayo, wonke umxholo wephepha kufuneka ube nesityebi ngamagama abalulekileyo kunye namaqhosha ukubonisa iinjongo zokukhangela iwebhusayithi yakho iyahambelana nesihloko ngokupheleleyo.
I-Metadata idluliselwa ngokubanzi kwiiH1, H2, H3 izihloko, imihlathi, iithegi ze-Alt kunye neenkcazo. I-element nganye yeemeta kufuneka izaliswe ngamagama angundoqo njengomxholo osekuqaleni, ngelixa isikhokelo esilungileyo sokwenza uphando oluphezulu lwe-injini usetyenziso olunokulinganisela. Ndiyathetha apha ukugcina ilungelo lokunqongophala kwegama elingundoqo, ngelo xesha kodwa ngaphandle kokuhamba ngokugqithiseleyo. Ngaphandle koko, umxholo wakho wokuphepha kwiphepha "unokugqithiswa" ngamagama angundoqo.
Iinqununu zeMpawu zenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwiinjongo zokusesha iinjongo eziphezulu kunye nokujoliswa kwezinto ezijoliswe kuzo.Ngaphezu koko, isakhiwo sokuqhagamshelana kwendalo siyinzame kunye nexesha elisebenzayo. Ingaba isebenza kanjani? Iinjongo zokukhangela zijonga iinqununu eziphezulu ezidibanisa iphepha lakho lokuqukethwe lomgangatho kunye namanye amawebhsayithi ahlonziwe kakuhle njengombonakaliso olungileyo. Kungenxa yokuba i-Google ikholelwa ukuba iwebhusayithi yakho kufuneka ithembeke phakathi kwabasebenzisi, ngoko ke ifanelwe ngabaphulaphuli ababanzi kunye nokuphakama okuphezulu kwiziphumo zophando.
Izinto ezongezelelweyo zokuphenya
Ezinye izinto ezisezantsi ziyizona zimiselo ezincinci okwamanje kubalulekile ukuba zibekwe kakuhle kwiluhlu lwe-Google lokukhangela iziphumo. Ingqwalasela ngokukhawulezileyo oku kulandelayo: ukukhawuleza kwekhasi, ukunika i-HTTPS ebalulekileyo kwi-protocol ye-HTTP, kunye ne-CTR yokulandelela rhoqo njengemitha yokuqala yamava omsebenzisi abalungileyo). Ndiyincoma ukuba nabo badibaniswe ukuba babe nefuthe eliphezulu kwizinga eliphezulu.